चुलबुल स्वस्तिमा 'बुलबुल' पछि गम्भीर :: प्रभाकर गौतम :: Setopati
चुलबुल स्वस्तिमा 'बुलबुल' पछि गम्भीर
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, साउन २३
स्वस्तिमा खड्का। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
'बा १ ह ३८९९'
बुलबुलमा रणकलाले चलाउने टेम्पो नम्बर।
गैरीधाराको 'स्टेसन फाइभ'मा स्वस्तिमा खड्कालाई केही बेर कुर्दै गर्दा उनी त्यही टेम्पो चलाउँदै आउँदैछिन् कि झैं लागिरहेको थियो। दिमागबाट कुर्तासुरुवाल लगाएकी रणकलाको छवि हटेकै थिएन। त्यही बेला उनी 'बुलबुल'को धङधङी हटाउने 'गेटअप'मा झुल्किइन्।
फिक्का सुन्तले टिसर्ट र निलो ग्रन्ज जिन्समा। त्यसै उज्याली स्वस्तिमा, एकपछि अर्को सफलताको चमकले झनै हँसिली देखिइन्।
दस करोड 'युट्युब हिट' नाघिसकेको 'कुटुमा कुटु' गीतको लोकप्रियतापछि उनको सफलताको 'ग्राफ' उक्लेको उक्लै छ। 'बुलबुल'को अभिनयका लागि सार्क फेस्टिभलको जुरी अवार्ड र राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत हात पारेपछि त धेरैले उनलाई 'नम्बर वन' अभिनेत्रीको पगरी समेत गुथाइदिए।
'चुलबुल' छविमा रमाइरहेकी स्वस्तिमालाई बुलबुलको सफलताले गम्भीर बनाउन थालेको छ।
'बुलबुलपछि हौसला बढेको छ। मबाट राम्रो कामको अपेक्षा राख्नेहरूको संख्या थपिएको छ। कलाकारका लागि यो चुनौती पनि हो,' उनले भनिन्।
स्वस्तिमाका लागि बुलबुलको कथाको बीऊ यही स्टेसन फाइभमै रोपिएको थियो। सिनेमाका कथा, पटकथा र सिने व्यवसायका खुराक साट्ने अड्डा हो स्टेसन फाइभ। यहाँ कफीको चुस्की र चुरोटको सर्कोसँगै सिने क्षेत्रका साना–ठूलो, राम्रा–नराम्रा सबै गफ हुन्छन्। फरक 'आइडिया' फुराउने कसरतमा लागेका धेरै नयाँ-पुराना अनुहार भेटिन्छन् यहाँ।
स्वस्तिमाका श्रीमान् निर्देशक निश्चल बस्नेत स्टेसन फाइभका पाँच सेयर होल्डरमध्येका एक हुन्। स्वस्तिमा अक्सर यहाँ आइराख्छिन्। उनले जानकारी दिइन्, 'विनोद दाइले बुलबुलको स्क्रिप्ट पढ्न दिएको यहीँ हो।'
स्वस्तिमालाई 'साँघुरो' सिनेमाको कथावस्तु निकै मन परेको थियो। 'साँघुरो' लेखककै कथामा काम गर्ने प्रस्तावले उनलाई रोमाञ्चित बनायो।
बुलबुलको प्रारम्भिक स्क्रिप्ट पढेपछि विनोदलाई सोधिछन्, 'नायिकाको उमेर ३० वर्ष र छोरीको उमेर ११ वर्ष छ। मलाई आमाको रोल दिन लागेको कि छोरीको?'
दुवैलाई हँसाउने यो ठट्टापछि अर्को गम्भीर प्रश्न पनि सोधिन्, 'यो क्यारेक्टरमा म फिट हुन्छु होला त? मलाई यस्तो भूमिकामा लिनु तपाईंका लागि रिस्क मोल्नु हैन र?'
स्वस्तिमाको यो प्रश्नलाई विनोदले सकारात्मक रुपमा लिँदै भनेछन्, 'आफ्नो चरित्रप्रति ओभर कन्फिडेन्स नहुनु राम्रो हो। तिमीलाई चरित्रमा पूरै भिज्न यसले सघाउनेछ।'
त्यसपछि २४ वर्ष पुग्न लागेकी स्वस्तिमाकै लागि भनेरै बुलबुलमा नायिकाको उमेर ३० बाट २६ मा झारियो। अनि बल्ल रणकलामा स्वस्तिमाले आफू भेटाउन थालिन्। त्यो बेलासम्म 'बुलबुल' विनोदको लेखनमा जोयस पाण्डेले निर्देशन गर्ने कुरा थियो। एक दिन अचानक विनोदले स्वस्तिमालाई आफूले निर्देशन गर्ने र मुख्य भूमिका जोयस पाण्डेले निर्वाह गर्ने कुरा सुनाए।
'विनोद दाइको कुरापछि झन्डै बुलबुलको प्रोजेक्ट छाडेर पैसा फिर्ता दिएको। किनकी जोयस पाण्डेलाई म दाइ भन्छु। उहाँको हिरोइन बनेर काम गर्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो,' उनले सुनाइन्।
यस्तै केही अलमलपछि अन्ततः जोयसको ठाउँमा चोपेन्द्रको भूमिकामा मुकुन भुषाल छानिए।
अन्ततः स्वस्तिमा रणकला भएसँगै उनको छवि फेरियो।
बुलबुलअघि धेरैले स्वस्तिमालाई 'धेरै नायक-नायिका भएको सिनेमा खेल्ने', 'आफ्नै बलमा सिनेमा चलाउन नसक्ने' जस्ता आरोप लगाउँथे। आज उनीहरू नै स्वस्तिमासँग काम गर्न लालयित छन्।
के अब स्वस्तिमाको प्राथमिकता बुलबुलजस्तै गम्भीर सिनेमा मात्रै हुनेछ?
उनको जवाफ, 'हैन। कलाकार भएपछि धेरै खालका रोल गर्नुपर्छ। राम्रो टिमसँग काम गर्ने कुरामा भने ध्यान दिनेछु।'
स्वस्तिमालाई बुलबुल जस्तो सिनेमा वर्षमा एकाध मात्र बन्ने भएकाले आफू धेरै 'चुजी' हुन पाउँदिन कि भन्ने चिन्ता छ। तर उनको दाबी छ, 'सिनेमा चलोस् नचलोस्, राम्रो टिम र आफूले खेल्ने चरित्र राम्रो होस् भन्नेमा ध्यान दिनेछु।'
साउन मसान्तमा उनको 'हजार जुनी'सम्म सार्वजनिक हुँदैछ। यसमा सिक्किमकी युवतीको भूमिकामा छिन् उनी। त्यसपछि आउने सिनेमा भने उनको जीवनकै प्रतिक्षारत सिनेमा हुनेछ।
'कुटुमा कुटु', 'हावा चल्यो सिरिरी' जस्ता चर्चित गीतमा नाचे पनि श्रीमान् निश्चलसँग पूरा सिनेमा खेल्ने उनको धोको थियो। आगामी सिनेमा 'घामड शेरे'ले उनको वर्षाैं पुरानो सपना पूरा हुने भएको छ।
स्वस्तिमाको करिअर मोडलिङ, म्युजिक भिडियो हुँदै सिनेमासम्म आइपुगेको हो। उनी अचेल ब्रान्ड प्रचारमा बढी देखिन थाले पनि राम्रो प्रस्ताव आए म्युजिक भिडियो खेल्न नछोड्ने बताउँछिन्। मोडलिङलाई उनी नयाँ कुरा सिक्ने ठाउँका रुपमा लिन्छिन्।
'नेपालमा अपवादबाहेक अभिनय क्षमताका आधारमा हैन, अनुहार र फिगर हेरेर नायिका बनाइन्छ। एउटा फोटो इन्स्टामा हिट भयो कि नायिका,' उनी थप्दै गइन्, 'यस्तो अभ्यास भएको इन्डस्ट्रीमा आउन मैले सुरूका चरणमा खासै संघर्ष गर्नुपरेन।'
तर राम्रो भूमिका पाउन भने लामो समय कुर्नुपरेको उनको अनुभव छ।
स्वस्तिमा कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ, अभिनय यात्रामा उनको असली संघर्ष बल्ल सुरू भएको छ। उनको यात्रामा केही सुखद संयोगले पनि काम गरेको छ। सामान्यतया बिहेपछि 'हिरोइन'को माग घट्छ। रंगमञ्चदेखि सिनेमासम्मका महिला कलाकारलाई विवाह अवरोध बन्ने गर्छ।
उनको हकमा उल्टो भइरहेको छ। स्वस्तिमा र निश्चलको कथा बेग्लै छ। उनीहरूको स्वभाव, सम्बन्ध र व्यवहार अलग छ। उनीहरू साथीसरह हिँड्छन्। मिडियामा सँगै जान्छन्।
धेरैले यो जोडीलाई 'राष्ट्रिय दाजु–भाउजू' भन्छन्। हालै उनीहरुलाई 'आदर्श जोडी' भनेर सम्मान समेत गरिएको थियो।
हाम्रो कुराकानीकै क्रममा पनि एक जना मान्छे स्वस्तिमाको नजिक आए, अंकमाल गरे र जिस्काउँदै भने, 'आदर्श जोडी'।
सिनेमा क्षेत्रसँग जोडिएका यो जोडीको 'सर्कल' एउटै छ। स्वस्तिमा भन्छिन्, 'मान्छे उही हो, तर त्यही मान्छेसँग उहाँ (निश्चल)र मेरो फरक सम्बन्ध हुन्छ।'
एउटै क्षेत्र भए पनि उनीहरूको आफ्नै 'स्पेस' छ।
'त्यो स्पेसलाई एक अर्काले महत्व दिएका छौं। एकअर्काको काममा सुझाव दिए पनि हस्तक्षेप गर्ने बानी छैन,' उनले प्रस्ट्याइन्।
धेरै सन्दर्भमा स्वस्तिमालाई नजिकका साथीसंगीले सोध्छन्, 'यो विषयमा निश्चलले के भन्यो?'
उनको जवाफ हुन्छ, 'केही पनि नाइँ।'
'रणकला'को भूमिका खेल्नेबारे स्वस्तिमालाई सुरूमा आफूप्रति नै शंका थियो। त्यो शंका बुझेरै होला निश्चलले स्वस्तिमाको आत्मविश्वास जाँच्न सोधेछन्, 'तिमी काम गर्ने नै हो नि?'
बेलाबेला यस्तै चासो देखाए पनि, आफ्नो कामसँग जोडिएको अन्तिम निर्णय लिन यो जोडी स्वतन्त्र छ।
स्वस्तिमा जोड दिँदै भन्छिन्, 'मेरो करिअरमा अगाडि बढ्न यही स्वतन्त्रताले सघाइरहेको छ।'
सधैंजसो प्रत्यक्ष रुपमा आलोचना वा 'कम्प्लिमेन्ट' लेनदेन नगरे पनि यो जोडी कहिलेकाहीँ भने खुलेरै बहसमा ओर्लिन्छ।
'त्यस्तो गफ प्रायः सिनेमाकै विषयमा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ। मात्र कहिलेकाहीँ,' उनले सुनाइन्।
निश्चलकै गफ चलिरहँदा, हामी बसिरहेको मेचकै पल्लोपट्टिको टेबलतिर लम्किरहेका थिए उनी। केही बोलेनन्, टाढैबाट पुलुक्क हेरे मात्रै। निश्चललाई हेरेपछि स्वस्तिमा पुरानै कुरामा फर्किइन्, 'हाम्रो सर्कुमस्टेन्स नै अलि बेग्लै छ।'
जति नै स्वतन्त्र भए पनि संगतको असर भइहाल्छ। एकातिर, निर्देशक श्रीमानसँग करिब चार वर्ष लामो संगत। अर्कोतिर, निरन्तर कामको अनुभव। स्वस्तिमामा यसको असर देखिन थालेको छ।
'सेटमा म अभिनय गर्ने कलाकारभन्दा बढी क्यामरा चलाउने, डिजाइन र अरू नेपथ्यका कलाकारसँग बढी घुलमिल भइरहेको हुन्छु,' सोझै नभने पनि भविष्यमा निर्देशक बन्ने रहरबारे संकेत दिइन्।
त्यही भएर अचेल सिनेमा हेर्दा पनि अभिनयबाहेक क्यामराको कोणमा उनको ध्यान बढी जान थालेको छ रे! निर्देशक दीपाश्री निरौला र विनोद पौडेलले पनि उनको यो गुणबारे स्वस्तिमालाई भनेका रहेछन्।
'चाँडै निर्देशक बनेको देख्न पाइन्छ कि?'
हाँस्दै कुरा मोडिन्, 'निर्देशन गर्ने रहर छ, तर केही वर्षपछि मात्रै। अहिले अभिनयमै रमाउने हो। काम सिक्ने हो।'
औपचारिक मात्रै हैन, अनौपचारिक सिकाइलाई पनि विशेष महत्व दिन्छिन् उनी। 'मल्टिस्टारर फिल्म'मा काम बढी काम गरेको भनेर आलोचना खेपे पनि त्यस्ता सिनेमालाई उनले सिकाइको पाठशाला बनाएकी छन्।
'धेरै र पुराना कलाकारसँग एउटै सेटमा काम गर्न पाउनु सिक्न पाइने अवसर हो,' उनी भन्छिन्।
स्वस्तिमाको सफलतामा यही सिक्ने भोकले ऊर्जाको काम गरेको छ। उनलाई आफ्नो कमजोरी पनि थाहा छ। उनी छिट्छिटो बोल्छिन्। यही बानीका कारण आवाज 'डबिङ' गर्ने बेला धेरै पटक 'रिटेक' लिनुपर्छ।
'बुलबुलमा पनि वर्कसप गर्ने बेलादेखि यही कुराले चिन्तित बनाएको थियो,' आफैंसँग असुन्तष्टि पोखिन्, 'केही ठाउँमा त फिल्म रिलिज भएपछि हेर्दा अलि नमिलेको जस्तो भइरह्यो।'
अहिले 'हजार जुनीसम्म'मा 'अवन्तिका' बन्दा पनि उनलाई त्यही लवज चुनौती बन्यो।
हाँस्दै भनिन्, 'सिक्कमका नेपालीले बोल्ने शैली सिक्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्यो।'
अवार्ड, चर्चा र सफलतालाई हौसला माने पनि त्यसैलाई दिमागमा राखेर काम गर्यो भने दबाब बढ्ने उनको अनुभव छ। काममा रमाउनु उनको स्वभाव हो। लगन साथ काम गर्दै, अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नु 'सफलता सूत्र' मानिन्छन्।
यस्तै विशेषता देखेर धेरैले स्वस्तिमालाई 'लामो दौडको घोडा' भन्न थालेका छन्।
यसलाई उनले पनि आत्मसात् गरेकी छन्, 'दुईचार वर्ष मात्रै बिताम् भनेर यो क्षेत्रमा आएको हैन।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २४, २०७६, ०६:५८:००
निर्देशक समाजमा लगातार दोश्रो पटक महिला नेतृत्व, रक्षा बनिन् अध्यक्ष
जमैकाकी टोनी बनिन् मिस वर्ल्ड २०१९